आरएसएस भनेको के हो? फिड के हो? एउटा च्यानल के हो? | Martech Zone
जबकि मानव एचटिएमएल देख्न सक्दछ, सफ्टवेयर प्लेटफार्म को सामग्री उपभोग गर्न को लागी, यो पढ्न योग्य ढाँचामा हुनुपर्दछ। मानक अनलाइन हो कि ढाँचा हो आरएसएस र जब तपाइँ तपाइँका भर्खरका पोष्टहरू यस ढाँचामा प्रकाशित गर्नुहुन्छ, यसलाई तपाइँको भनिन्छ फिड। WordPress जस्तो प्लेटफर्मको साथ, तपाईंको फिड स्वत: उत्पन्न हुन्छ र तपाईंले केही गर्नुपर्दैन।
कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं आफ्नो साइटको डिजाइन तत्वहरू सबै हटाउन सक्नुहुन्छ र सामग्रीलाई अर्को साइट वा अनुप्रयोगमा फिड गर्न सक्नुहुन्छ। आरएसएसको आविष्कार यस्तै भयो!
आरएसएसको अर्थ के हो?
धेरै व्यक्तिहरू आरएसएस शब्दको अर्थ हो भनेर विश्वास गर्दछन् वास्तवमै सिलिन्डिक सिन्डिकेशन तर यो सहज रूपमा लेखिएको थियो रिच साइट सारांश... र मूल रूपमा RDF साइट सारांश.
आरएसएस भनेको के हो?
आरएसएस एक वेब आधारित कागजात हो (सामान्यतयाः एक भनिन्छ फिड or वेब फिड) जुन स्रोतबाट प्रकाशित गरिएको छ - लाई सन्दर्भित गरिएको छ च्यानल। फिडले पूर्ण वा संक्षिप्त पाठ, र मेटाडेटा, जस्तै प्रकाशन मिति र लेखकको नाम समावेश गर्दछ।
टेकन्यूज डेलीले मानिसहरूलाई कसरी सरल सिन्डिकेसन (आरएसएस) को फाइदा लिन सक्छ भनेर वर्णन गर्दै टेलिभिजनमा मानिसहरूबाट यो छोटो भिडियो हो:
तपाई किन ख्याल गर्नुपर्छ?
आरएसएस फीड फिडली जस्ता प्लेटफर्मको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ जहाँ प्रयोगकर्ताहरू उनीहरूको लगातार आधारमा पढ्न चाहने च्यानलहरूको सदस्यता लिन्छन्। फिड रिडरले तिनीहरूलाई सूचित गर्दछ जब त्यहाँ अद्यावधिक सामग्री हुन्छ र प्रयोगकर्ताले साइट पढ्न बिना नै यसलाई पढ्न सक्छ! साथै, फिडहरू तपाईंको सामग्रीलाई अन्य वेबसाइटहरूमा सिन्डिकेट गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ (हामी हाम्रो लेखहरू यसमा प्रदर्शन गर्दछौं DK New Media साइट र कर्पोरेट ब्लगिंग सल्लाह), वा तपाईंको सामाजिक मिडिया च्यानलहरू फिडमको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ फिडप्रेस, बफरवा ट्विटरफिड.
ओह - र नबिर्सनुहोस् हाम्रो आरएसएस फिडको सदस्यता लिनुहोस्!
टैग: rdf साइट सारांशरिच साइट सारांशआरएसएसआरएसएस फीडआरएस को लागी के होएक च्यानल के होफिड के होफिड च्यानल के होएक आरडीएफ साइट सारांश के होएक धनी साइट सारांश के होवेब फिड के होएक आरएसएस च्यानल के होवास्तवमै के हो सरल सिन्डिकेशनके हो आरएसएस
वेब डिजाइन सर्वेक्षण बाहेकको एक सूची
अप्रिल 25, 2007 मा 8: 14 PM
त्यहाँ, डग। केहि मैले वास्तवमै बुझें !! म आधा विश्वस्त छु
अप्रिल 25, 2007 मा 8: 42 PM
ओहो! तपाई एकदम धैर्यवान हुनुहुन्छ क्रिस्टिन। म मेरो पोष्टको साथ अधिक र अधिक टेक्निकल प्राप्त गर्न चाहन्छु। मैले महसुस गरे कि यो समय सुस्त भयो र केहि ब्यक्तिहरुलाई समात्न मद्दत पुर्‍यायो।
जब तपाईं यस चीजमा गीक मिरिएका हुनुहुन्छ, यो सम्झन गाह्रो हुन्छ कि सबैलाई थाहा छैन तपाईंले के कुरा गरिरहनु भएको छ!
आरएसएस मा एक अन्तिम नोट। लेखमा शब्द र तस्विरहरू मात्र हटाउन को लागी कल्पना गर्नुहोस् ... अन्य सबै अनावश्यक चीजहरू हटाइएमा। आरएसएस फिडमा पोष्ट जस्तो देखिन्छ त्यस्तै हो!
म सिफारिश गर्दछु Google Reader!
अप्रिल 26, 2007 मा 4: 38 एएम
मेरो लामो-गर्न-सूचीको चीजहरू मध्ये एक डगलसलाई आरएसएसको वास्तवमा के हो भनेर एक सानो व्याख्या लेख्न सोध्नु थियो is.
त्यो प्रि-एम्परेटिभ स्ट्राइकको लागि धन्यबाद, डग। (र मेरो ब्लगमा नयाँ सेक्सनको लागि प्रेरणा पनि, 😉)
अब तपाईंले सोचिरहनु भएको छ कि अर्को पटक उत्पत्ति पुस्तकमा पढ्दा तपाईले अर्को कम्प्यूटरको विषय सम्झनु हुनेछ।